कोहलपुरको मेयर पदमा फुलाराम थारुपनि प्रतिस्पर्धामा – Online Khojkhabar
१०:५५ बिहान, चैत्र २४, २०७८
आसन्न बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन आउन करिव महिना दिन बाँकी छ । दलहरु चुनावी अभियानमा जुटिसकेका छन् ।
संघीय संरचनाको दोस्रो पटक हुन लागेको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुको चर्चा–परिचर्चा पनि भइरहेको छ । आठ वटा स्थानीय तह रहेको बाँकेमा अन्य पालिकाभन्दा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकामा धेरैको चासो छ । राजनीतिक दलहरुले यी दुई पालिकालाई प्रतिष्ठाकै विषय बनाएका छन् ।
पश्चिम नेपालको उदयमान सहरका रुपमा रहेको कोहलपुर नगरपालिकाको कमाण्ड हाँक्न धेरैले आकांक्षा देखाएका छन् । रुत्तारुढ नेपाली काँग्रेसबाट मात्रै आधा दर्जन नेताहरुले मेयर पदमा आफनो उम्मेदवारी दावी गरेका छन् । पछिल्ला युवा पुस्ताका लोकप्रिय नेता फुलाराम थारु मेयर पद उम्मेदवारी घोषणा गर्ने तयारीमा छन् ।
काँग्रेस महासमिति सदस्य थारुमा नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता छ । कार्यकर्ताको भावना बुझ्ने, दुख पर्दा अहोत्र खटिने र सहयोगी भावनाका थारुप्रतिको रुझान कार्यकर्तामा पनि देखिन्छ । नेपाली काँग्रेस बाँकेको पूर्व पार्टी उपसभापतिको जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरिसक्नुभएका थारु कोहलपुर क्षेत्रका नागरिकमाझ लोकप्रिय छन् ।
५६ हजार ७८७ मतदाता रहेको कोहलपुरमा थारुबाहुल भएकाले पनि फुलाराम थारु बलियो उम्मेदवार हुन् । ‘स्वभाविकरुपमा मेरो मेयर पदमा दावी हो उनले भने–‘पार्टीले विश्वास गरेर टिकट दिए चुनावी लड्ने हो ।’
कोहलपुरको मेयर पदमा नेपाली कांग्रेसबाटै बलराम शर्मा, भानुभक्त भट्टराई, राजेन्द्र श्रेष्ठ , पूर्ण आचार्य, सञ्जु थारु, चिन्तामणि धिताल, चक्र अधिकारीको पनि चर्चा छ ।
गर्मीबढेसँगै बाँकेमा तातो हावा ‘लु’ चल्न थाल्यो, सतर्कता अपनाउन आग्रह
बाँकेमा होमआइसोलेसन कति सम्भव ?
३:१६ मध्यान्ह, भदौ २१, २०७७
चितुवाको छाला र हड्डीसहित तीनजना पक्राउ
५:५१ मध्यान्ह, पुस ११, २०७७
कब्रस्तानमा सटर बनाउँदा स्थानीयको बिरोध, भन्छन–‘६२ सटरको भाडा खोइ ?
१:०२ मध्यान्ह, भदौ ७, २०७८